စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လမ်းကြောင်းများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှု | Martech Zone
Holger Schulze နှင့်အရာအားလုံးနည်းပညာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဘလော့ဂ် အတွက် B2B စျေးကွက်၏စစ်တမ်းတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည် LinkedIn အပေါ် B2B နည်းပညာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသိုင်းအဝိုင်း.
ကျွန်တော်မေးသည် Troy Burk, Right On Interactive ၏စီအီးအို - က စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်း ၎င်းသည်စစ်တမ်းကောက်ယူမှု၏ရလဒ်များကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဦး ဆောင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပါစစ်တမ်းကိုကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်ပြီး B2B စျေးကွက်၏အစိတ်အပိုင်းအချို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ကောင်းမွန်သောမက်ထရစ်ကိုပေးသည်။ Holger မှ Kudos နှင့်ဤအတူတကွဆွဲထုတ်သောအဖွဲ့။ တုံ့ပြန်မှု ၉၀၉ ခုတွင်ဖြေဆိုသူအများစုသည် ၀ န်ထမ်း ၁၀၀ အောက်သာရှိသောဆော့ဖ်ဝဲ၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများမှဖြစ်သည်။ ဤကဏ္intoတွင်ပါဝင်သောကုမ္ပဏီများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အလားတူအလားအလာများ၊ အတားအဆီးများနှင့်ပန်းတိုင်များကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ဤကုမ္ပဏီများသည် ၀ ယ်ယူသူအသစ်များကိုတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး၊ ဘတ်ဂျက်အကန့်အသတ်ဖြင့် ၀ ယ်ယူရန်ကြိုးစားနေကြသည်။ အများစုသည်ခဲထုတ်လုပ်မှုကိုအဓိကထားသည်၊ ကုန်ကျစရိတ်သည်အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ROI တိုင်းတာမှုသည်အခြေခံအားဖြင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
မှန်ကန်သောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဏ္relationshipsာရေးအကျိုးအမြတ်၊ ပိုမိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ၊ အတွင်းပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုသက်ဆိုင်သောနှင့်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောဖောက်သည်အတွေ့အကြုံများနှင့်ညီမျှသည်။
ထို့အပြင် Troy ကလက်ခံသူများသည်စစ်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးဘတ်ဂျက်အကြောင်းပြောဆိုသော်လည်းတစ်ဝက်ကျော်၏ ၅၇% သည်ထိရောက်မှုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့ ်၍ တိုင်းတာသည်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတွင် ၃၇% ကဘတ်ဂျက်သည်အကြီးမားဆုံးအဟန့်အတားဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပို၍ စျေးသိပ်မကြီးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာစျေးကွက်သမားတွေကသူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်းကိုမှန်ကန်စွာတိုင်းတာမလားဆိုတာမေးခွန်းထုတ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်အပေါ် မူတည်၍ မည်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပလက်ဖောင်းကိုမတိုင်းတာသင့်ပါ။ သင့်တိုင်းတာမှုကိုပြုလုပ်သင့်သည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြန်ပေါ်အခြေခံပြီး!
ဒါဟာမှိန်နေတဲ့အောက်ခြေလိုင်း လက်ခံသူများသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောသို့မဟုတ်ကျဆင်းနေသောဘတ်ဂျက်ရှိသောစျေးသက်သာသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းနည်းကိုပိုမိုလိုချင်သည်။ ပြီးတော့သူတို့ကအောင်မြင်မှုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့အောင်မြင်နှုန်းကိုတိုင်းတာသည်။
Tags: b2bb2b စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကုန်ကျစရိတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်စျေးနှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်Troy burk